Daniel Alves oo kaga digay kooxda Barcelona guuldarada heshiiska Neymar Jr bilooyin kahor – Gool FM
(Yurub) 04 Sebt 2019. Wargeyska “Mundo Deportivo” ee dalka Spain ayaa shaaca ka qaaday in Daniel Alves uu ku sharad tamay loolanka u dhexeeyay kooxaha Barcelona iyo Paris Saint-Germain, ee ku saabsanaa mustaqbalka xiddiga ay isku dalka ka soo wada jeedaan ee Neymar Jr.
Neymar ayaa lala xiriirinayay inuu ku laaban doono Barcelona inta lagu guda jiray suuqii kala iibsiga ee xagaaga, kaddib mudo labo sano uu ugu soo dhaqaaqay kooxda Paris St Germain heshiis rikoor ah ee gaarsiisnaa 222 milyan euro.
Bishii May ee lasoo dhaafay, xiligaas uu Daniel Alves ahaa xiddig ka tirsan Paris Saint-Germain ayaa wuxuu ka hadlay mustaqbalka Neymar Jr, wuxuuna xaqiijiyay in ninka ay isku wadanka yihiin uusan ka tagi doonin caasimada Faransiiska.
Daniel Alves ayaa xilligaas sheegay:
“Waxaan sharad ku galayaa, in Neymar Jr uu kusii nagaan doono Paris Saint-Germain”.
“Neymar wuxuu ku jiraa xaalad kala guur ah, sababtoo ah natiijooyinka uma fiicna sida la rabay, aad ayuu u jahwareersan yahay, wuxuuna doonayaa in natiijada ay si cad u muuqato”.
Waxaa xusid mudan in xiddigaha Daniel Alves iyo Neymar Jr ay si wada jir ah uga wada ciyaareen kooxaha Barcelona iyo PSG, si la mid ah xulka qaranka Brazil.
Waakee xiddiga ku sugan Chelsea ay dooneyso Juventus inay la saxiixato suuqa jiilaalka ee soo aadan??